२०७६ माघ २९ गते , बुधवार प्रकाशित
सहकारीमार्फत उद्यमशीलता वृद्धि गर्न चाल्नु पर्ने आवश्यक कदम अघि बढाउन छ बुँदे घोषापत्र जारी गर्दै दुई दिने राष्ट्रिय कार्याशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ ।
सहकारीमार्फत उद्यमशीलता विकास गर्नका लागि विद्यमान नीति, कानुन र नियमलाई सहकारीमैत्री बनाउन पहल गर्ने, सहकारीमा सुशासन र सहकार्य गर्ने, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको मार्गदर्शन पालन गर्ने, एकिकृत रुपमा सहकारीमार्फत युवाहरुलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, एकिकरणमार्फत सहकारीको गुणात्मक विकास गर्ने, सहकारीहरु आपसमा मिलेर लघु, मझौला र ठूला उद्योग स्थापना गर्ने लगायतका घोषणा गोष्ठीले गरेको हो ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको आयोजन भएको “सहकारीमार्फत उद्यमशिलता विकास राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी” को भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले उद्घाटन गरेकी हुन् । उनले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कृषि उत्पादन बृद्धि गर्न र व्यवसायीकीकरण गर्नका लागि सहकारी महत्वपूर्ण संयन्त्र भएको बताउनुभएको छ । जमिनको व्यवस्थित सुधार नगरी कृषिले फड्को मार्न नसक्ने भएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सहकारीले भूमिका खेल्न सक्ने भएकाले सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाउने उल्लेख गरिन् ।
उनले घरेलु तथा साना उद्योगको विकास र विस्तारमा सहकारी लाग्नुपर्ने भन्दै अब सहकारीले रोजगारी सिर्जना हुने उद्यमशिल कार्यक्रम गर्नु अपरिहार्य भएको बताइन् ।
महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष केशव बडालले सहकारी ऐन २०७४ र सहकारीलाई उद्योग व्यवसायमा जानका लागि बाधा गरेका अन्य ४७ वटा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने जनाए ।
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सह अध्यक्ष दक्ष पौडेलले अहिलेको पुस्ता उद्यमी नबनी भावी पुस्ता उद्यमी बन्न नसक्ने बताउनुभयो । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले नेतृत्वमा बसेकाले आफ्नो सोच फराकिलो पार्नुपर्ने औंल्याए ।
महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले महासंघले सहकारी अभियानमार्फत उद्यमशीलता बृद्धि गरी सहकारीको योगदान बृद्धि गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरेको जनाए ।
गोष्ठीको पहिलो दिनमा “सहकारीमार्फत उद्यमशिलता विकासका लागि सरकारका विभिन्न निकायको भूमिका” विषयमा वित्तीय संघियताका विश्लेषक डा. खिमलाल देवकोटा, “सहकारीमार्फत युवा स्वरोजगार सिर्जन नविन प्रविधिको प्रयोग” विषयमा क्षमता विकास विशेषज्ञ विश्वराज कार्की र “व्यवसायिक सफलताका लागि तनाव व्यवस्थापन” विषयमा बरिष्ठ राजयोग ध्यापन प्रशिक्षक विजयराज शर्मा आफ्ना कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
त्यसैगरी दोश्रो दिन “दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्यवयनमा सहकारीको भूमिका” विषयमा केशव प्रसाद बडाल, “सहकारीमा उद्यमशीलता विकास र संस्थागत सुशासन” विषयमा डा. टोकराज पाण्डे र “सामाजिक सुरक्षा कोषको महत्व र यसका योजना तथा कार्यक्रमहरु” विषयमा कपिलमणि ज्ञवालीले कार्यपत्र पेश गरेका थिए । गोष्ठीका सहभागिहरुले सहकारीहरु कसरी व्यवसायिक हुने र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक पर्ने विषयमा आफूहरुले सिकेको बताए । उनीहरुले अभियान र जागरणमा जाँदा कुनै अप्ठ्यारा नरहेको तर वास्तविकतामा सहकारीमार्फत उद्यम व्यवसाय गर्न भने विभिन्न ऐनकानुनले अप्ठ्यारो पारेको अनुभव आफूहरुको रहेको बताए । त्यस्ता ऐनकानुन परिमार्जन गरी सहज रुपमा उद्यमव्यवसाय गर्न मिल्ने बातावरण बनाइनुपर्नेमा उनीहरुको एकैस्वर रहेको थियो ।
कोरोना अझ तीब्र भएर फैलिदै जानु ठूलो चिन्ताको कुरा
कोरोनाका कारण आजदेखि उपत्यकामा आउन जान रोक
सन्दर्भ व्याजदर “म्याण्डेटरी” हुनुहुँदैनः अभियन्ता